Zaka tsara : fitondrana manao izay saim-pantany | NewsMada
Ahoana ihany izy ity? Ny raharaham-pirenena, ny fiainam-bahoaka… Tsy hita be ihany. Mafanafana ratsy toa hisy inona iny; avy eo, mangina… Mandra-pahoviana? Mandeha ihany ny fotoana. Mifampiandry kendry tohina?
Manao sy manohy ny ataony hatrany ny mpitondra: tsy fanarahan-dalàna, kiantranoantrano, tsy fangaraharana… Tsy ahoana na iza hitsikera? Resaka ihany ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tanana, ady amin’ny kolikoly…
Ahoana indray, ohatra, faramparany teo, ireo mpisafo raharaham-panjakana? Nakarina filankevi-pifehezana any amin’ny lapam-panjakana Iavoloha. Ny mikaroka sy mahita ary mamoaka ny marina indray no mitondra faisana?
Ny voa famaky indray no mandoa lasiray. Ny fanafenana ny ratsy atao no fahaizana politika sy fitantanam-panjakana. Tsy ahoana izay soatoavina repoblikanina, fisaraham-pahefana, lalàna… Karazam-pitondrana inona izao?